कोरोना संक्रमणबाट वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.सुनिल झाको मृत्यु – Dainik Sangalo
कोरोना संक्रमणबाट वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.सुनिल झाको मृत्यु
November 16, 2020 272
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.सुनिल झाको मृत्यु भएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा कार्यरत प्राध्यापक एवं वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. झाको सोमबार मृत्यु भएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ ।
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा कार्यरत डा. झालाई तीन हप्तादेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो । तर, सबै प्रकारका विधिको प्रयोगबाट उपचारको प्रयास गरे पनि सोमबार झाको मृत्यु भएको छ ।
मधुमेह र पार्किन्सन्सकोसमेत समस्या भएका डा.झालाई सुरुमा नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । त्यसपछि उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल रेफर गरिएको थियो । रेमडिसिभिर, प्लाज्माथेरापीलगायतका विधिबाट उपचार गरिएको थियो ।
परिवारका अन्य सदस्यमा पनि कोरोना संक्रमण भएको थियो । परिवारका अन्य सदस्य भने कोरोना मुक्त भएका छन् ।
Prevधनी र कमजोर : कसले पाउने कोरोनाभाइरसको खोप?
Nextबेलायतको घोषणाः कोरोनाको खोप क्रिसमसअघि नै वितरण गर्ने
आफूलाई क्यान्सर भएको झुट बोलेर १३ लाख सहयोग उठाएर हनीमून गइन्, अब जेल जाँदै
पर्वतको कुस्मामा पहिरो खस्दा मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध
जन्म र मृत्युको अवसरमा दिने २० किलो चामल प्रभावकारी बन्दै
आज पौष १८ गते शनिबार साढे सातको शनिदोष हटाउन संकटा देवीलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर आजको, राशिफल पढ्नुहोस